हल्का भुटेको ६ पोटि लसुनको सेवन गर्नुहोस्, २४ घण्टा भित्र मिल्ने`छ यस्तो चम`त्कारिक फाइदा ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/हल्का भुटेको ६ पोटि लसुनको सेवन गर्नुहोस्, २४ घण्टा भित्र मिल्ने`छ यस्तो चम`त्कारिक फाइदा !
हाम्रो भा`न्सामा लसुन धेरै प्रकारको परिकार तयार गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। खाद्य पदार्थमा लसुनको प्रयोग गर्दा पाचन प्रणाली म`ज्बोत बनाउँछ। लसुनको सिधै सेवन गर्नु पनि निकै लाभ`दायक हुन्छ। हालै एक रिसर्चका अनुसार एक व्य्कतिले यदि हल्का भुटेको लसुन सिधै सेवन गर्छ भने २४ घण्टा भित्र उसको शरीरमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन्छ।
अनुसन्धानका अ`नुसार ६ वटा भुटेको लसुन खा`एको एक घण्टा पछि, यो लसुन पेटमा पच्छ र यसले पौ`ष्टिक प्रभाव दिन थाल्छ। २ देखि ४ घण्टामा, हाम्रो शरीरले यी लसुनबाट निकालिएको एन्टी-अक्सी`डेन्ट तत्वहरू अव`शोषित गर्छ। र यस्ता प्रभाव देखाउँछ।
यसको सेवनले श`रीरमा रहेका क्यान्स`रका को`षहरु म`र्छन् , यसले हाम्रो मेता बोलि`जम मज`बूत गर्छ साथै शरीरको अतिरिक्त बोसो पगाल्छ। ६ घण्टापछि, लसुनले हाम्रो रगतमा रगतमा रहेका संक्र`मण हटा`उने काम गर्छ। लसुनको सेवन गरेको १० पछि लसुनको पौ`ष्टिक फाइदा`हरू सुरु हुन्छन् र यसले धेरै रोगहरू समय भन्दा पहिले निकै पार्न मद्दत गर्छ।
लसुन सेवन गरेको २४ घ`ण्टा हुँदा सम्म शरीरमा यस्ता परि`वर्तन देखा पर्न थाल्छन्।
रक्तचाप निय`न्त्रण , कोलेस्ट्रोल कम गर्छ , शरीरमा रहेका विषाक्त पदार्थहरू मल र मूत्र पथबाट बाहिर निकाल्छ , हड्डी मजबूत बनाउँछ, शरीरमा विशेष प्रकारको उर्जा आउँछ
सतुवा के हो ? यस्ता औषधीय गुण हुन्छन्